Kala beddelashada Xogta laga Motorola in Samsung
Samsung shaki saaraha smartphone ugu balaadhan looga isticmaalaa maanta. Goynta functionalities ku laayeen qiimaha in ay yihiin awoodi karo ka dhigaysa Samsung jecel. Sidaa darteed, dadka isticmaala iyo aad u badan ayaa lagu soo guuray qalabka Samsung ayaa waayadan dambe.
Haddii aad hada u soo guurtay on taleefanka Samsung oo rabto in lagu wareejiyo dhammaan xogta aad ka phone Motorola in ay aad leedahay doonaa laba doorasho:
1. Copy / paste dhammaan xogta gacanta ka mid ah aalad si kale isticmaalaya laptop ama computer ah.
2. Isticmaal Samsung ayaa app Switch Smart.
Waa quruxsan iska cad in la isticmaalayo hab Buuggan waa hab aad u daalo iyo muddo dheer. Waxaa dalbanaya in user leeyihiin heer aad u sarreeya samir iyo waqtiga oo dhan ee dunida ku gacmihiisa. Habkaan si deg deg ah aad u gabaabsi noqon doona oo noqday wax aad looga xumaado in waqti aad u yar.
Habka kale ee sida isticmaalaya Samsung Smart Switch si ay u gudbiyaan xogta ay tahay mid fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa rakibi Switch Samsung Smart App ka https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.easyMover&hl=en Waxa loo baahan yahay in lagu xiro labada isha iyo qalabka caga.
1. Marka aad u rakibay, waxaa looga baahan doonaa in aad dooratid "Dhoofinta in Device Galaxy" ka isha halka furan meesha aad u socoto qalab Samsung hayo app.
2. Next, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan xog ah in aad rabto in lagu wareejiyo si aad qalab Samsung. Ka dib markii xulashada xogta la doonayo waa in aad ku dhacay "Transfer" iyo qalabka ay bilaabi doonaan xidhiidhka.
3. Waqtiga kala iibsiga ku dul size ee xogta lagu wareejiyo waxay ku xirnaan doontaa.
Labadaas wajiba ay yihiin wax wadaag caddaalad ah ay of ceebaha qaar ka mid ah oo kala ah:
1. Habka buugga waa mid aad u daalo iyo muddo dheer. Tan iyo markii ay jirto shaqo badan oo buugga loo baahan yahay, halis u ah baadi aadanaha ayaa weli had iyo jeer.
2. Habka buugga ma bixiso hab si ay u gudbiyaan Guda call iyo messaged ka Motorola in phone Samsung.
3. Habka labaad inkastoo waxay u baahan tahay dadaal ay yar tahay laakiin waxa ay leedahay arrimaha waafaqsan qaar ka mid ah. The Switch app Samsung Smart waa kaliya la jaan qaada Motorola Droid RAZR, RAZR Mini, RAZR Maxx iyo ATRIX III.
Si aad u qabtaan kor ku soo sheegnay iyo dhibaatooyin badan oo kale, Wondershare MobileTrans waxaa la soo saaray. Wondershare MobileTrans Waa u fududahay ah in la isticmaalo qalab kaas oo lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ . Waxaa loo qoondeeyey si uu kaaga caawiyo in ay xogta ka phone jir wareejinta si aad telefoon cusub. Waxa intaa dheer in, Wondershare MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad la abuuro hayaan xogta aad on your computer oo loo isticmaali karaa haddii khasaare xogta ka qalab aad. Wondershare MobileTrans Waa la jaan qaada Nokia, Motorola, Blackberry, iPhone iyo dhammaan taleefanada Android. MobileTrans Waxaa laga heli karaa labada Windows iyo MAC users, iyo version premium ay la iibsan karaa kaliya $19.95. Version maxkamad A ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha intii soddon maalmood ah.
Wondershare MobileTrans loo isticmaali karaa xogta ka si phone gudbaayo phone kale sida farriimaha, xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, video iyo barnaamijyadooda. Sidoo kale waxaad dib kartaa ilaa aad iPhone iyo badbaadin xogta ku saabsan pc, tusaale ahaan, iyo ka dib soo celin marka aad rabto. Asal ahaan dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in aad si degdeg ah loo wareejin karaa telefoonka ah inay telefoonka kale.
Si aad xog ka Motorola wareejiyo telefoonka Samsung, waxaad u baahan doontaa:
1. USB fiilooyinka x2
2. laptop A ama computer ah
Si aad u billowdo xogta ka Motorola wareejiyo si aad telefoon Samsung waxaad u baahan doontaa:
1. Download Wondershare ka http://www.wondershare.com/phone-transfer/ . Waxaa rakib si aad laptop ama computer.
2. Isticmaalka fiilooyinka USB ah, oo labadoodaba telefoonada aad lifaaq computer ama laptop in aad kaliya ku rakiban Wondershare MobileTrans in.
3. Marka aad ordi Wondershare MobileTrans, aad arki doonaa shaashadda la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey:
4. Waxaa jiri doona dhowr ah hababka ku qoran shaashada. Waxaa ka mid ah "Phone in Phone, Soo Celinta ka hayaan, ee kaabta aad Phone iyo masixi aad Old Phone". Dooro "Phone in Phone Transfer" mode.
Labada aaladaha aad 5. Wondershare MobileTrans muujin doonaa ka dib markii iyaga laga arko.
6. Ogeysiis in menu ee xarunta muujinaysaa waxyaabaha lagu wareejiyo qalabka Ahaado. Hubi ama uncheck sanduuqyada sida aad looga baahan yahay. Guji "Start Copy" marka aad dhamaysid.
7. Wondershare MobileTrasn bilaabi doonaan habka wareejinta. Menu A muuqan doona oo muujinaya horumarka kala iibsiga.
8. Waxa aad joojin kartaa habka wareejinta waqti kasta garaacida ah "Cancel" button Si kastaba ha ahaatee, in la hubiyo in mana qalab uu ka go'ay halka habka wareejinta ayaa weli socda.
9. Marka geedi socodku waa dhameystiran, oo mar dambe ma aad rabto in xogta la joogo in aad telefoon Motorola, waxaad tagi kartaa dib u shaashadda weyn oo dooro "masixi Xogta laga aad Old Phone" in ay si fudud u saaro dhamaan xogta aad ka.
Codeeyaan qalab Samsung in aad hadda la isticmaalayo oo nagu caawiya sidii loo ogaado taas oo ugu doonteen qalab Samsung ee dalka Mareykanka ayaa hadda!
3. Samsung Galaxy S5 Active
5. Samsung Galaxy qod6
6. Samsung Galaxy S5 Sport
9. Samsung Galaxy ahee 6.3
10. Samsung Galaxy S4 Google Edition
Sida loo dardar Your Phone
Best 5 Manager Kharashka Android u wuxuuu Your Money
Sidee si ay u gudbiyaan Apps in Android 4.4, KitKat
Sida loo Guba Sony Bloggie videos in DVD
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Cell Phone LG fudayd
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Motorola in Samsung